I-China CoSee Anti Fog Glasses Lens Cleaner Liquid Solution Defogger Spray for Glassglass Umkhiqizi Nomphakeli | Co-Bona
Izibuko, i-computer, i-mobile screen, isibuko nokunye ukuhlanzwa
1. Inkungu elwa
2. Ukukhiqizwa kwe-workshop engenaluthuli
3. Vimbela inkungu kuma-lens
4. Alukho uphawu lwamanzi
Izinga lenkungu Anti
Amabhodlela angama-25 ebhokisini lephepha, amabhokisi wephepha ayi-12 ebhokisini, amabhodlela angama-300 kwikhathoni (ibhokisi elijwayelekile lokuthekelisa)
Ukuhlaziywa kwe-Anti-fog Principle:
Isibuko sixosha amaconsi amanzi. Amaconsi amanzi awakwazi ukunwetshwa.
I-anti-fog liquid inamathela ngokuqinile ebusweni be-lens ngemuva kokufaka isicelo.
I-anti-fogging agent kanye ne-droplet fusion yamanzi. Nciphisa ukungezwani kwamaconsi amanzi.
Ukwakhiwa kwefilimu lamanzi elincane kakhulu. Susa ukukhipha okwehla kwamanzi ngokucacile.
Inkungu ye-Anti ilungele noma yikuphi uhlobo lwaphezulu nolwe-lens kusuka kwizibuko kuya kwizingilazi noma ukuvikelwa okwenziwe ngokwezifiso. Ngokushesha nje lapho ifakwa, izoshiya ifilimu elincane lokuzivikela, imise ukufingqana ekufakeni ama-lens. I-Co-See Anti-fog Spray nayo iyisifutho sokulwa namagciwane esisusa amabala futhi sigcine indawo ehlanzekile.
• Vimbela ukungahambisani kahle nokuhamba kwenkungu
• I-anti bacterial
• Vikela amalensi nezingilazi
• Kuphephe cishe kuzo zonke izinhlobo zezingubo zamehlo
Inqubo Yokukhiqiza Ilensi:
Isakhiwo esenziwe ngokwezifiso
Izinto ezenziwe ngezifiso
1.Ukukhiqizwa kwamabhodlela - gcwalisa uketshezi
I-Wuxi Co-See Packing Co., Ltd.yinkampani yendwangu ye-lens, i-lens yokuhlanza i-lens nezinye izinto zokuhlinzeka ngezibuko zamehlo eChina. Singanikeza ngesevisi eyodwa yokumisa kunoma yiziphi izidingo ezibonakalayo. Sikhonza izitolo eziningi ze-optical nezikhungo ze-optometry iminyaka eminingi. Okuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-10 kulo mkhakha kanye ne-FDA, iziqu ze-ISO njll kanye nezitifiketi ezijwayelekile.
Masigcine ukuncintisana okukhulu ezimakethe zamanje. Uma unesithakazelo kumikhiqizo yethu, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane.
Langaphambilini Entsha Imfashini enkulu ye-PC Uzimele we-Pilot I-Nose Bridge Izibuko Zelanga Ezingenalutho
Olandelayo: Imibala Ephakeme Ehlanganisiwe Imibala Yenayiloni Olungaguquguqukayo Izibuko Zokufunda Izintambo Zentambo Yentamo Yokugcina Ibhande
Amapayipi ekhala abicah wezingilazi anti-slip adhesi ...